အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်: အလန်းဇယား ဦးထုပ်များ
20 Responses to “အလန်းဇယား ဦးထုပ်များ”
ရှာရှာဖွေဖွေ ပါလားအစ်မချောရေ..။ စာကျက်နေရင်းနဲ့ဝင်လာတာ..။ စိတ်ကြည်သွားတယ်.။
ဦးထုပ်တွေ အတွက် ဗဟုသုတ အပေါ် ...
ကျေးဇူးပါ အစ်မရေ ...
ဟီဟီ...ဦးထုပ်တွေကလည်း..ဆောင်းချင် စရာ တွေကြီးပဲ...
ချောချောရေ...သာမီးက ကော်ကော်ကြိုက်သူဆိုတော့ အပေါ်ဆုံးက ဦးထုပ်နဲ့ဆိုအလုပ်ဖြစ်တယ်...။
ရှာရှာဖွေဖွေတွေကို ဖွေဖွေရှာရှာ တင်လာပြန်ပြီပေါ့..။
အင်း... ဆောင်းရာသီ ဦးထုတ်လေးကို မြသွေးနီအတွက်ချန်ထား..။ ကိတ်မုန့်တုံးဦးထုတ်ကြီးကိုတော့ ချောပဲ ယူပါလေ..၊ အလွန်လိုက်ဖက်မယ်လို့ ထင်မိပါကြောင်း... :)
မိန်းမပျိုလေးတွေ ဆောင်းတတ်တဲ့ ဆောင်းရာသီဦးထုပ်
အင်္ဂလိပ်မတွေက ပုံမှန်သွားလာရင် ဦးထုပ် မဆောင်းကြပါဘူး ပွဲဆိုရင် ဦးထုပ်တွေ လာဝယ်ပြီး ဆောင်းကြတယ်။ ခေါင်းဆံညှပ်နဲ့ တွဲထားတဲ့ ဦးထုပ်သေးသေးလေးတွေက တော့ လူငယ်တွေ ပိုကြိုက်ကြတယ်။
ပွဲတွေမှာ လူထက်ငါ အဆန်းဆောင်းကြတာ ကြည့်လို့ ကောင်းတယ်
မမချောရေ.. ဦးထုပ်လေးတွေက ဆန်းလှချည်လား.. ဆောင်းရဲတာဆိုလို့.. ဆံပင်ညိုညိုနဲ့ဆောင်းထးတဲ့ ဦးထုပ်ညိုညိုပဲ ရှိတယ်.. :)
ဆောင်းရာသီဦးထုပ်လေးက အလှဆုံးပါပဲ ချောရေ
ဒေါ်ချောကလည်း ပုံလေးတွေကြည့်ပြီး သဘောကျမယ်လုပ်မိပါတယ် . . . ပုံအောက်ကစာဖတ်လိုက်မှ မပြုံးဘဲကို မနေနိုင်အောင်ဖြစ်ရော...ဘယ့်နှယ်ဗျာ. . . ၀က်သားတုတ်ထိုးကို ခေါင်းပေါ်တင်ရမယ်လို့...ပေါက်ပေါက်ရှာရှား)
ပုံတွေကြည့်လိုက်လာရင်းက ယောက်ျားဖြစ်ရတာ အာဝေနိကဒုက္ခ အတော်ကင်းပါလားလို့ တွေးပြီး စိတ်ချမ်းသာမိသေး . . . အိမ်ရှင်မကို ကြောက်ရတဲ့ ဒုက္ခလေး တစ်ခုကလွဲလို့ပေါ့း)
ဒေါ်ချောပေးခဲ့တဲ့ ကွန်မန့် သုံးခုတောင်မှ စပမ်းထဲရောက်နေတာ မနေ့ကမှ ပြန်တွေ့လို့ ပြန်တင်လိုက်ရသဗျား... အားနာပါရဲ့ . . .
ဆန်းဆန်းပြားပြား ဦးထုပ်လေးတွေ လေ့လာသွားတယ် ချောရေ။
အိုင်ဒီယာထုတ်နိုင်သူတွေကိုလည်း ချီးကျူးပါတယ်း)
အိုး... ပိုက်ဆံများမရှိလို့ကတော့လေ.. မချောရဲ့ ဦးထုပ်တွေကို အလစ်သုတ်ပြီး ရောင်းဦးမှာ... :P ဦးထုပ်ပေါင်းစုံကို စုံစုံလင်လင်နဲ့ ကြည့်သွားပါတယ် ခင်ဗျာ
ရိုးရိုးရှင်းရှင်း ဆောင်းရာသီဦးထုပ်လေးပဲ ကြိုက်ပါရစေ။း)